I-Apple ifumana imvume yemoto ezimeleyo eCarlifonia | Ndisuka mac
Imoto ezimeleyo ka-Apple yinyani okanye ibonakala ngathi iya isondela kwinyani. Ngokukodwa xa iiyure ezimbalwa ezidlulileyo sifunde ukuba inkampani ifumene imvume yokuqhuba ukuya kuthi ga kwiimoto ezintathu ezizimeleyo. Kwelinye icala, yonke into ibonakala ngathi ibonisa ukuba iprojekthi ye-Titan ye-Apple iyaqhubeka, kodwa ubuncinci kwesi sigaba sokuqala asizukubona sithuthi senziwe nge-100% ngu-Apple. Ngokwenyani izithuthi eziza kwenza olu vavanyo zintathu zeLexus RX450h ukusukela ngo-2015, ilungelelaniswe ukuze iApple iguqule isoftware yayo evumela ukuzimela ngokupheleleyo kwesithuthi. Ngale ndlela, uApple ujoyina uluhlu lweempawu ezihloniphekileyo, ezazikhe zavavanya izithuthi zabo ezizimeleyo, ezinje ngeGoogle, iTesla, iBMW, iHonda, iFord, iNissan.
Ukufumana imvume, abafaki-zicelo kufuneka bahlangabezane neemfuno zokuqala: bonisa ukuba zeziphi izithuthi okanye izithuthi eziza kuthatha inxaxheba kuvavanyo kwaye zipapashe ingxelo emfutshane ngomgama ohanjiweyo sisithuthi kwiphepha le-DMV. Inyathelo elithathwa ngu-Apple kubalulekile, kuba Linyathelo eliya phambili ngokuthatha isigqibo sokuthatha inxaxheba kwimarike ezimeleyo yezithuthi.
Ikwathetha isiqinisekiso sokuba, ubuncinci okwangoku, iApple ayisebenzi ekwenziweni kwesithuthi ngokupheleleyo, ukuba ayisiyiyo kwinxalenye yesoftware eza kuvumela ukuqhuba.
Into eseyimfihlo zizigqibo ezizakuthathwa lisebe le UBob MansfieldUmphathi wezithuthi zika-Apple. Asazi ukuba baceba nakuphi na ukusebenzisana nomenzi weemoto okanye endaweni yoko baceba ukwenza indlela yabo bodwa. Ngokwimithombo yangaphakathi, abaphathi benkampani baceba ukuvavanya inkqubo entsha ngo-2017 kwaye bahlalutye ukusebenza kwayo ekupheleni kwayo. Emva kolu vavanyo, inkampani iya kuvavanya ukuba iyaqhubeka na neprojekthi yemoto ezimeleyo, ekule meko iqhutywa ngemfihlo enkulu, ngakumbi iimveliso eziziswe yinkampani kule minyaka idlulileyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » I-Apple ifumana imvume yemoto ezimeleyo eCarlifonia
Kwimeko yeKernel Panic ????